Ndị Taliban jidere ego na ọla edo $ 12.3 nde n'aka ndị bụbu ndị ọrụ, weghachite ya n'ụlọ akụ mba
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi na Afghanistan » Ndị Taliban jidere ego na ọla edo $ 12.3 nde n'aka ndị bụbu ndị ọrụ, weghachite ya n'ụlọ akụ mba
Akụkọ na -agbasa ozi na Afghanistan • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Crime • Akụkọ Ọchịchị • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Ndị Taliban enwetala ego na ọla edo n'ụlọ ndị ọrụ gọọmentị Afghanistan gara aga na ọfịs mpaghara nke ụlọ ọrụ ọgụgụ isi gọọmentị mbụ wee weghachite ya na akụ Da Afghanistan Bank, ụlọ akụ ahụ kwuru na nkwupụta.
Ndị Taliban weghaara ego na ọla edo $ 12.3 nde n'ụlọ na ọfịs nke onye isi nchịkwa Afghanistan na ndị ọrụ nchekwa.
Ndị ọrụ Taliban enyefela ihe dị oke ọnụ ahịa n'aka Da Afghanistan Bank bụ ụlọ akụ etiti mba ahụ.
Dị ka nkwupụta ụlọ akụ ahụ si kwuo, inyefe akụ ahụ na -egosi na ndị Taliban na -etinye aka na nghọta.
Da Afghanistan Bank (DAB), ụlọ akụ etiti mba ahụ, wepụtara nkwupụta taa na -ekwupụta na ndị Taliban enyefela ndị ọrụ ụlọ akụ ihe dị ka nde dollar 12.3 na ụfọdụ ọla edo.
"Ndị ọrụ nke Alakụba Alakụba nke Afghanistan site na inyefe akụ ahụ n'ụlọ akụ mba gosipụtara nkwenye ha maka nghọta," Da Afghanistan Banknkwupụta kwuru.
Mgbe o weghaara isi obodo Kabul na August 15, Taliban kwuputara nguzobe gọọmentị onye nlekọta na Septemba 7, na -ahọpụta ọtụtụ ndị minista na -arụ ọrụ na onye na -arụ ọrụ dị ka gọvanọ n'ụlọ akụ etiti Afghanistan.
Da Afghanistan Bank bụ ụlọ akụ etiti nke Afghanistan. Ọ na -ahazi ọrụ ụlọ akụ na njikwa ego niile na Afghanistan. Banklọ akụ ahụ nwere alaka 46 ugbu a na mba ahụ niile, ebe ise n'ime ndị a dị na Kabul, ebe isi ụlọ akụ ahụ dịkwa.
The Taliban ewegharala ikike na Afghanistan izu abụọ tupu amachibido US ịpụpụ ndị agha ya mgbe agha afọ iri abụọ dara ọnụ.
Ndị mwakpo ahụ wakporo gafee mba ahụ, weghara obodo ukwu niile n'ime ụbọchị ole na ole, ka ndị nchekwa nchekwa Afghanistan na ndị US na ndị ha na ha jikọrọ aka kwụrụ.
Onye bụbu onye isi ala Afghanistan Ashraf Ghani nọ na -agụ agụụ wee kwuo okwu ole na ole ka ndị Taliban na -agafe mba ahụ. Ka ndị Taliban rutere n'isi obodo Kabul, Ghani gbapụrụ na Afghanistan, ebubo na ọ nwere nde $ 169 na ego ezuru, na -ekwu na ọ họrọla ịhapụ mba ahụ ka ọ ghara ịwụfu ọbara ọzọ.
Ndị Taliban achọọla igosipụta onwe ha dịka ndị na -amachaghị nke ọma n'afọ ndị na -adịbeghị anya. Kemgbe ha weghaara ọchịchị, ha ekwela nkwa ịkwanyere ikike ụmụ nwanyị ugwu, gbaghara ndị lụsoro ha ọgụ ma gbochie Afghanistan ka ọ bụrụ ntọala maka mwakpo ụjọ. Mana ọtụtụ ndị Afghanistan na -enwe obi abụọ banyere nkwa ndị ahụ.